Cayman Islands: Yepamutemo COVID-19 Yekushanya Kugadziridza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Cayman Islands: Yepamutemo COVID-19 Yekushanya Kugadziridza
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Cayman Islands Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Dai 11, 2020
panguva Covid-19 musangano wevatori venhau, vatungamiriri veCayman Islands 'vakadzokororazve kuti hunhu hweshure kwekupindura kweCayman Islands kudenda re COVID-19, riri kuramba richiisa hupenyu pamusoro pezvimwe zvinhu zvese.
Mushure memunamato uchitungamirwa naFata Naveen D'Souza, vatungamiriri vakasimbisawo kuti Hurumende iri kushanda nesimba kuona kuti zviitiko zvemuno zvemuno, izvo zviri kukuvadza, zvinogona kuvhurwa nekukurumidza nekuchengetedzeka sezvinobvira kune vese munharaunda. "Zvitsuwa zveCayman hazvina kugadzirira kufa chero hupenyu kungo dzoka pane zvakajairwa", akadaro Prime Minister Hon. Alden McLaughlin.
Vakwegura vane hupfumi hwezivo, huchenjeri uye ruzivo rwavanounza zvagara zvichingove zvichikosha kune eCaymanian nzira yehupenyu uye hunhu.
Vatungamiriri vakakurudzira vese muCayman Islands kuti vave nemoyo murefu uye varambe vachivimba nematanho akaiswa mukushanda.
Chiremba Wehutano, Dr. Samuel Williams-Rodriquez yakashuma kuti:
Kubva pamigumisiro mazana maviri nemakumi maviri nepfumbamwe yakagamuchirwa, makumi maviri nemapfumbamwe akaedzwa asina hutachiwana uye imwe yakanaka, inova kesi yekutapurirana munharaunda uye haina chiratidzo. Kuongorora kwekuti murwere akatapukirwa sei kwakatanga neHuzhinji Hutano, kusanganisira kutsvaga kwekubata.
Maitiro azvino ezvinhu ezvakaipa zvakanyanya ari kukurudzira uye kuwongorora kwakawanda kuri kuenderera mberi.
Pachipatara cheHSA Flu Clinic, paive nevarwere vasere nezuro apo runhare rweFlu rwakagamuchira mafoni gumi nemana.
90 vanhu parizvino vari muhurumende vanomhanyisa zvivakwa zvekuzviparadzanisa, kuwedzera kune vanhu zana negumi muhutano hweveruzhinji-hutano hwakatemerwa kusarudzika munharaunda.
Kugara uchiongorora zvinoitwa kuti vapinde chikoro gore rega rega kwakamiswa nekuda kwemamiriro azvino nekuda kwevanamukoti veParuzhinji Hutano vari kutumirwa kubata COVID-19.
Veruzhinji Hutano hwaenderera mberi nemavhiki matanhatu ekuzvarwa uye makiriniki ekuvhiya, vachishanda pamwe chete navana chiremba kuHSA, vashandi vehutano hweveruzhinji uye mamwe makiriniki akazvimirira. Kubva Muvhuro, 11 Chivabvu, vanhu vanotsvaga sevhisi vanofanirwa kubata 244-2562 kuti vataure kuna Ruzhinji Hutano mukoti uye vawane zvitsva; kusiya meseji kana vasina mhinduro, inozodzoserwa nekukurumidza.
Vasiri-vechimbichimbi varwere vanogona parizvino kubata HSA general kudzidzira kiriniki yezvavanoda neti-mishonga, zvirevo kana kuferefetwa. Makiriniki akazvimiririra ari kupawo sevhisi-yekurapa.
2 zvipatara zveveruzhinji zvehutano zvipatara zvinomisikidzwa kana huwandu hwezviitiko hunowedzera kusvika panopararira HSA. Ndinovimba havazodikanwa asi kungoitika. Ivo vaizoshandiswa pakurapa zvakajairika varwere uye COVID -19 milder kesi. Tichifunga nezvezvinoitika zvezviitiko zvebvunzo, kana zvivakwa zvikasashandiswa ivo vacharamba vachipa sosi yakakosha iyo inogona kumira kana paitika dutu kana imwe njodzi.
Zano kune avo vari kugadzirira kudzokera kubasa: inwa mvura zhinji, gara mupfungwa nepamoyo, ramba uchidzidzira kutenderera munharaunda, kufema uye hutsanana hwemaoko.
Parizvino hapana hurongwa hwekuchenesa nzvimbo dzeveruzhinji.
Mutungamiri Hon. Alden McLaughlin Akati:
Nekudzvinyirira kuri kuenderera mberi kuvhurwa, Mutungamiriri akaona kuti zvingave "zvinosuwisa" kupa zvibayiro zvakawanda kusvika parizvino pamwe serudzi uye sevanhu kungozvirasa nekuti vamwe munharaunda havagone kumirira kwevhiki kana maviri kusvika kuvhurazve mabhizinesi.
Cayman's "ethos" kusvika pahunhu hwevanhu ndeyekuchengetedza hupenyu uye haina kugadzirira kupira chero hupenyu kungo dzokera pane zvakajairwa. Maonero iwayo haasi ekuda kuchinja panguva ino. Saka zvese zviri kuitirwa kuwedzera kuongororwa kuitira kuti zviremera zvinyatsonzwisisa hutachiona hwehutachiona munharaunda, zvichiteverwa nekutora matanho ekuzvitsvaga, kutsvaga pamwe nekuvarapa.
Mwoyo murefu unodikanwa kubva kune vese kunyange zvichikosheswa kuti mabasa nehupfumi zvakakosha.
Little Cayman anosunungurwa kubva kuzvizhinji zvinodzora; Cayman Brac iri pamwe chete nemamwe mashoma ekuchengetedza matanho mukuchengetedza. Grand Cayman achange ari muchinzvimbo icho munguva pfupi iri kutevera kana mhedzisiro yekuongorora ichiramba ichikurudzira sezvavari kuita parizvino.
Zvitsuwa zveCayman zvakagara zvichiremekedza vanhu vachembera, kunyanya nekuda kwehungwaru, njere uye nemabatiro avanoita hupenyu hwevanhu vese. Hupenyu hwavo hunokosha.
Akashuvira kwaziso dzekuzvarwa kune aimbova Mutauri weImba, Hon. Mary Lawrence, anemakore makumi masere nhasi, uye vaimbova Chief Education Officer Mai Islay Conolly vane makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nhasi, Mai Hyacinth Rose naMai Miriam Anglin, pamwe nekwaziso yeZuva raAmai kuvanamai vese munharaunda.
Zvisaririra zvemunhu aimbova MP, Mai Leda Esterleen Ebanks vorara kuLA nhasi, pachiitiko icho mireza yaive pahafu-mast sechiratidzo chekuremekedza makore avo ekushandira veruzhinji. Premier yakatungamira kunyarara kweminiti mundangariro yake.
MaBritish Overseas Territories ari kuita mushe mukupindura COVID-19 uye kumeso, sezvatiri isu, zvemhedzisiro mhedzisiro iri kurwisana nenzira yekuchengeta nyika dzayo dzichimhanya kwemwedzi mitanhatu kusvika kuma6-9 isina vashanyi.
Anokudzwa Gavhuna, VaMartyn Roper Akati:
Gavhuna akadzokorora Mutungamiriri maererano necayman Islands 'ethos yekuchengetedza hupenyu uye ruremekedzo rwunowanzo kupihwa kune vakwegura munharaunda.
Vakapa runyararo kumhuri yemushakabvu Mai Esterleen 'Esther' Ebanks uye zvishuwo zvezuva rekuzvarwa kune aimbova Mutauri uye aimbova CEO akacherechedzwa naPremier.
Akatendawo nzira iyo yakatorwa nevazhinji munharaunda mukubata nezvinodiwa neCOVID-19.
Ndege dzekubuda muCosta Rica neHonduras dzasiya nhasi.
Ndege yeMiami inoitika nemusi weChishanu, 15 Chivabvu uye inogona kubhuka zvakananga neCayman Airways online kana nekufonera 949-2311. Iyo yekudzoka nendege yakavhurika kune pre-vanotenderwa vafambi chete uye Cayman Airways ichave inotaurirana navo zvakananga.
Ndege yekuDominican Republic inoitika nemusi weSvondo, 17 Chivabvu uye avo vari kutsvaga kufamba vanofanirwa zvakare kubata CAL zvakananga. Kune izvi, CAL chengetedzo ichave yakavhurwa pakati pa9 am-6 pm Mugovera uye 1-5 pm neSvondo.
Parizvino, vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu vasiya ndege dzekubuda uye 921 vadzoka.
Kupopota kwake kwaive kwevane makumi manomwe neshanuth Chirangaridzo cheD-Day zvichiratidza kuzvipira kusingagumi kwemaNazi, iyo Red Cross paRed Cross Day nhasi nevanozvipira vayo.
Akarumbidza zvakare Alliance to End Domestic Violence, iyo pamwe nemasangano ehurumende neCrisis Center vakaronga webinar yevanhu vanobatwa nemhirizhonga mudzimba panguva yechirwere ichi chiri kuitika.
Gurukota rezvehutano Dwayne Seymour Akati:
Gurukota rakapa mhere kuvanamai vese vari muCayman Islands nezveZuva raAmai Svondo.
Akajekesa konzati chaiyo "Kuna Amai Nerudo" iyo ichaitwa pamwe chete neSADA Musangano uye neLions Club yeGreat Cayman. Inoratidzira akanakisa eCayman matarenda uye yakakosha muenzi mashandiro nemunyori wepasi rose vhidhiyo muimbi Glacia Robinson, chiitiko ichi chinoitika Svondo 10 Chivabvu na6 pm uye chichafambiswa pamhepo paLions Club yeGreat Cayman neCayman Mothers Day kongiresi Facebook mapeji pamwe ne nhepfenyuro gare gare paCIG TV.
HMCI Director Danielle Coleman Akati:
Cayman Islands iri munzira yekugadzirira ese COVID-19 uye iri kuuya Hurricane Mwaka.
Commissioner wePurisa, VaDerek Byrne inoyeuchidza veruzhinji:
Nekudzoreredzwa kwemutemo wekutora nguva muLC uye CB svondo rino mitemo yakatarwa yekugara yasara panzvimbo kusvika 15 Chivabvu 2020 na5 mangwanani.
Yakapfava nguva yekubva pamba kana pekugara munzvimbo dzeMitemo paGrand Cayman ramba uchishanda pakati pemaawa e 5am ​​na8pm Muvhuro wega wega kusvika Mugovera.
Zvakaomarara Nguva yekudzoka kana kuzara kukiya, chengetedza yevanoregererwa vanokosha masevhisi vashandi vanoramba vachishanda pa CB pakati pemaawa e8pm na5am husiku Muvhuro kusvika Svondo zvichibatanidzwa. On Grand Cayman, zviri zvakaoma kusvika pamba pakati pemaawa e 8pm uye 5am husiku Muvhuro kusvika Svondo zvichibatanidzwa uye Maawa makumi maviri nemaviri akaoma kusvika pamba neSvondo - kubva pakati pehusiku Mugovera kusvika pakati pehusiku Svondo.
Nguva dzekurovedza muviri dzisingapfuure maminetsi makumi mapfumbamwe dzinotenderwa pakati pemaawa e 5.15am uye 7pm zuva nezuva Muvhuro kusvika Mugovera. Hapana nguva yekurovedza muviri inobvumidzwa pa Svondo panguva yekutora nguva. Izvi zvine chekuita naGrand Cayman chete sezvo zvirambidzo izvi zvakabviswa muCB neLC.
Yakazara-maawa makumi maviri nemasere zvakaoma nguva yekufamba sezvo zvine chekuita neBeach Kuwana kune Ruzhinji Mahombekombe paGrand Cayman inoramba iri munzvimbo kusvika Chishanu, 24 Chivabvu. na5am. Izvi zvinoreva kwete kupinda kumahombekombe eruzhinji paGC chero nguva kusvika Chishanu 15 Chivabvu na5 mangwanani. Izvi zvinorambidza chero munhu kupinda, kufamba, kushambira, kubata nyoka, kubata hove kana kuita chero mhando yemhando yegungwa pane chero ruzhinji rwegungwa paGrand Cayman. Ichi chibvumirano chinobviswa kubva kuCayman Brac kutanga China, 7 Chivabvu manheru.
Kutyora mutemo wakaomarara wekudzokera kumba imhosva inotakura mutongo we $ 3,000 KYD uye kujeri kwegore rimwe, kana zvese zviri zviviri.
HSA inowedzera COVID yekuyera kugona
Iyo Health Services Authority yakawedzera yavo yekuyera kugona kweECOVID-19 kuongororwa nekuvhurwa kwemaviri drive kuburikidza nekuvheneka matende evashandi vepamberi uye kuwedzera kwerabhoritari yavo kuti iwedzere kugadziriswa kwemasampuli pazuva.
HSA CEO Lizzette Yearwood akati anofara nemafambiro akaitwa kubva pakuvhurwa svondo rapfuura. "Kune zvakawanda zvakagadziriswa uye nhanho mukuita izvi kuona kuti inoshanda nemazvo sezvinobvira."
Paunosvika pakutyaira kweHSA kuburikidza nenzvimbo yekutarisa, maitiro ese anotora maminetsi mashanu.
HSA yakawedzerawo nzvimbo yemarabhoritari kuCayman Islands Hospital, yakabatana neyakavanzika rabhoritari uye yakahaya uye kudzidzisa vamwe vashandi vema laboratori kuitira kuti vawedzere kuyedza. "Kwave kuri kuedza kukuru kubva kuvanhu vazhinji kutisvitsa pano, uye tinoramba tichitarisa nzira dzekuwedzera kuwedzera kugona," akadaro Yearwood. "Uku kuvandudzwa kwazvino nekuwedzeredzwa idanho rakakosha munzira kwayo yekuwedzera kuyedza."
Veruzhinji Hutano huri kuronga kugadzwa nevashandi vemberi kune ramangwana rinotaridzika apo kuedza kwekuyedza kwawedzera. Chikamu chechipiri vashandi vemberi uye chikamu chevashandi vekuvaka parizvino vari kurongerwa kuongororwa. HSA, Veruzhinji Hutano uye Chief Medical Officer vari kushanda pamwe kuti vaise pamberi vanhu kana bhizinesi vanoonekwa sevanokosha vashandi vemberi.
“Kune zviuru zvevanhu zvinoonekwa sevashandi vemberi, saka zvinotora mavhiki mashoma kuti vapfuure nevazhinji. Tinonzwisisa kuti pane kushushikana muhuwandu hwevanhu kuti vaongororwe saka tinoita zvese zvatinogona kuti tiongorore vanhu vakawanda vanokodzera, ”vakadaro Dr Samuel Williams-Rodriguez, Medical Officer wehutano. "Pamusoro pekutyaira kuburikidza nekuvheneka, nhengo kubva kuPublic Health dziri kuongororawo nzvimbo panzvimbo dzemabhizimusi mahombe, izvo zvinoita kuti vashandi vabhadharwe vasina kusiya basa."
Vanhu vanovhenekwa COVID-19 vanogashira mhedzisiro kuburikidza nepamhepo MyHSA Patient Portal, iyo inopa nzira yakachengeteka yekuwana mhedzisiro yemabara. Veruzhinji Hutano huchaenderera mberi nekubata chero munhu anoongorora kuti akanaka kune COVID nerunhare. Vanhu vese vakaongororwa vachapihwa yemahara murwere portal account.
Sezvo denda re COVID idambudziko renyika, HSA iri kushanda pamwe chete nezvipatara zvakazvimirira zvemuno mukuyedza kuongorora vashandi vazhinji vanokosha sezvinobvira.
"Pari zvino tiri kushanda neDoctors Hospital nekuvatumira mabhizinesi akasiyana siyana kuti vanovhenekwa mukuyedza kuona kuti vawedzera huwandu hwevanoongorora," akadaro Dr Samuel Williams-Rodriguez, Medical Officer wehutano. "Hutano hweCayman Islands ichave imwe nzvimbo yekutarisa vashandi vanokosha mumatunhu ekuMabvazuva."
Zvese zvivakwa zvekutarisa ndezvekugadzwa chete uye mabhizinesi anozobatika nePublic Health kune mamwe nguva ekugadzwa.